DEG-DEG: Mid kamid ah beelaha Puntland oo ku dhawaaqday inay wasiiraddooda iyo xildhibaanadooda kala baxayso Puntland kadib markii……… | Puntland News
DEG-DEG: Mid kamid ah beelaha Puntland oo ku dhawaaqday inay wasiiraddooda iyo xildhibaanadooda kala baxayso Puntland kadib markii………
Beesha Tanade Daarood oo kamid ah beelihii wax ka dhistay dowladda Puntland ayaa sheegray inay bisha January ee sannadka cusub ay siyaasiyiinteeda xilalka ka haya dowladda Puntland kala baxayso.
Beeshaan oo dhowaan ku dhowaaqday inay kalsoonidii kala laabatay dowladda Puntland, ayaa bisha January u qabatay siyaasiyiinta xilalka ka haya Puntland inay yimaadaan magaalada Galgodob, oo ah xarunta beesha, halkaas oo loogu sheegayo inay iska casilaan xilalkooda.
Beesha Tanade ayaa waqtigaan Puntland, waxaa ugu jira wasiiro, ku xigeeno, agaasimayaal guud iyo xildhibaano, sidoo kale, waxaa intaas sii dheer agaasime waaxeedyo, saraakiil iyo askar.
Wasiirka kalluumaysiga Puntland, Cabdirashiid Maxamed Xirsi iyo xildhibaanada ayaa wada dedaalo ku saabsan in dowladu jawaab lagu qanci karo ka bixiso tabashada beesha Tanade, taasoo keentay inay dowladda kalsoonidii kala noqotay.
Beesha Tanade Daarood, ayaa ka carrootay markii dhowaan wax laga qaban waayay gogol ay u dhigatay beelaha Hartiyeed, iyadoo dalbatay in dastuurka la furo oo loo kordhiyo kuraasta ay ku leeyihiin oo haatan ah labo xildhibaan iyo xildhibaan kasoo galay gobolka Nugaal oo kursigiisu aan joogto ahayn.
Dhinaca kale, dibad bax lagu taageerayay go’aanka beesha ayaa ka dhacay degmada Galdogob ee gobolka Mudug.
Halkaan ka daawo.
2 Responses to DEG-DEG: Mid kamid ah beelaha Puntland oo ku dhawaaqday inay wasiiraddooda iyo xildhibaanadooda kala baxayso Puntland kadib markii………
besha lelkase waa dulmi doon. dulan cid ka yelaysa ma ay jirto.
Besha lelkase bal ha ay firiya inta reer oo wanag doonka oo ugeysa in isbedel si nabad ah dulmi wax ku dooning; sida Beelaha: GUMASOOR, IDDIGFACLE, DANWENE, GAHAYLE, AMMANLE, iyo kuwo kale oo badan.
Kabaxa puntland hadaad rabtaan.
Galdogob maaha xaruntiina , assaaskii Galdogob wuxuu ayaa mid qabiilo badan lahaayeen, walina waa sideediid.
Ka carooda Puntland oo hàkusoo noqonina, inta aduunku jiro